बंगलादेशी राष्ट्रपतिको स्वदेश फिर्तीलगत्तै मन्त्री फेर्ने तयारी, बामदेव र नारायणकाजी पनि मन्त्रीको सूचीमा « Kathmandu Pati
प्रकाशित मिति : २०७६, २७ कार्तिक बुधबार ०७:५८
काठमाडौं – लामो समयदेखि प्रसंग चल्दै, सेलाउँदै आएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा अहिले प्रमको सचिवालयभित्रै सहयोगी टोली परिवर्तनसम्मको कुरा निस्किएको छ । सामान्यतया दुई अध्यक्षलाई जता उडाउन मन लाग्छ, नेकपारुपी जेट विमानलाई त्यतै लाने र त्यसरी नै ट्रान्जिट बनाउने गरिएकोमा छिट्टै पार्टी स्थायी समितिको बैठक डाकेर त्यसमा ब्रेक लगाउने अभ्यास शुरु हुन लागेको प्रतित हुन्छ ।
बंगलादेशी राष्ट्रपतिको स्वदेश फिर्तीलगत्तै मन्त्री फेर्ने तयारी छ । पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्को स्वरुप कस्तो होला ? यसबारे अनेकन कोणबाट चर्चा चल्न थालेको छ । पुनर्गठनपूर्व सबै मन्त्रीले राजीनामा दिने हो भने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र यही मापदण्डभित्र परेर अर्का उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव पनि हट्ने होला । त्यसो भएपछि नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थसहित उपप्रधानमन्त्री दिने तयारी त हुँदै छैन ? वा वामदेव गौतम\_नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री बनाइन पनि सक्छ । कथं प्रधानमन्त्री लामो समय उपचारका लागि विदेश बस्नुपर्ने अवस्था आएमा कावा प्रमबाट पार्टी र सरकार पनि चलाउने हिसाब पो हो कि सभामुखमा सुवास नेम्वाङलाई निरन्तरता दिने, हृदयेश त्रिपाठी, घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रभु साह, जनार्दन शर्मा प्रभाकर, अग्नि सापकोटा, शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्ने र उपेन्द्र यादवले बाहिरिन चाहेमा राजपालाई भिœयाउने सम्भावनाबारे पनि घनिभूत छलफल चलिरहेको छ ।
यता, नेकपाभित्र कमिटी प्रणाली ध्वस्त छ । पार्टी अत्यन्त बलियो, प्रणालीचाहिँ कमजोर । सरकारको कामलाई पार्टी पंक्तिले डिफेन्ड गर्ने, भित्रै असन्तुष्टि राख्ने, सुझाव दिने क्रम ठप्प छ । केन्द्रीय कमिटी सुनसान, पोलिट ब्युरो गर्भमै र स्थायी समिति गुमनाम रहेको पृष्ठभूमिबीच नौ सदस्यीय सचिवालय नै सर्वशक्तिमान देखिन्छ । पार्टी पद्दति नहुँदा सल्लाहकार समूह हावी भएर सरकार बद्नाम भयो पनि भनिँदैछ । सचिवालय नै आँखाको तारो बनिरहेको बेला कसैलाई जिम्मा लगाउनुप¥यो भने प्रम भइसक्नुभएका झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई केपीले नेतृत्व सुम्पिने सम्भावना छैन । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई तत्काल प्रधानमन्त्री बनाउने सुरसार त झनै देखिँदैन ।
आधा–आधा कार्यकालको सम्झौता भए पनि एकजनाले नछाडी त्यो अहिल्यै कार्यान्वयन भइहाल्ने पनि हैन । गृहमन्त्री बादल र रक्षामन्त्री ईश्वरले पनि राजीनामा दिने भएपछि सरकार धान्न सक्ने नारायणकाजी र वामदेव संसद बाहिर हुनुुहुन्छ । बाँकी रहनुभएका विष्णु पौडेल, जो सांसद र पार्टी नेतृत्वमा पनि हुनुहुन्छ, दुवै अध्यक्षको विश्वासिलो पनि उहाँ नै । प्रधानमन्त्रीले डायलासिस प्रक्रिया छाडेर पनः मिर्गाैला प्रत्यारोपण (ट्रान्सप्लान्ट) गर्नुपर्ने र दुई– तीन महिना बाहिरै बस्नुपर्ने भयो भने पनि यता थेग्नसक्ने मान्छेको खोजी हुंदा विष्णु पौडेल रोजाईमा परेको हुन सक्छ । यद्यपि यसबारे बुझ्न खोज्दा पौडेलले आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो ।
अहिले सरकार तलमाथि हुने अवस्था होइन । यही सरकारबाट सबैथोक चल्ने भएपछि संसदीय दलको नेता पनि फेरिन्न । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामध्ये समस्या न्यायपालिकामा छैन, व्यवस्थापिकामा मात्रै हो । कार्यवाहक सभामुखको व्यवस्था छैन, यसर्थ सभामुख नयां चुन्न बांकी छ । प्रधानन्यायाधीश बाहिर गएको बेला वरिष्ठतम् श्रीमान् स्वतः कामु हुने प्रचलन छ । सरकारको हकमा भने प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहेसम्म, संसदीय दलको नेता नफेरिएको अवस्थामा उपप्रममध्येका वरिष्ठ स्वतः कार्यवाहक हुने व्यवस्था छ । पहिला–पहिला कावाको अध्यक्षतामा क्याबिनेट बस्दैनथ्यो । सुशील कोइरालाको क्याबिनेटमा एकपटक वामदेवले त्यो अभ्यास गर्नुभएको हो । प्रम ओली सिंगापुर जांदा बसेको क्याबिनेट बैठकलाई पनि उतैबाट भिडियो सिष्टममार्फत अध्यक्षता गरिएको थियो । तर, ती सबै अभ्यास अल्प अवधिका अड्कोपड्को थिए । अब भने प्रधानमन्त्रीको स्वदेशमा उपस्थिति लामो समय ग्याप रहन सक्ने सम्भावनाको कारण सबै हिसाबले भरपर्दाे बिकल्प खोज्न लागिएको हो । ईश्वर पोख्रेलले महाधिवेशनदेखि नै केपी ओलीलाई दिलो ज्यानले सघाउंदै आउनुभएको पनि अनेकन घटनाक्रम नियाल्दा उहांसंग भांचिएको मन जोडिइहालेजस्तो लाग्दैन । यद्यपि राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो । आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।